Football Khabar » एथ्लेटिकोदेखि बार्सिलोनालाई ‘डर’ : खेलअघि कोम्यानका पाँच भनाइ
स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा आज राति एथ्लेटिको मड्रिड र बार्सिलोना सिजनको पहिलो खेलमा आमनेसामने हुँदैछन् । यो खेल एथ्लेटिकोको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसा राति ठीक १ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ । अंक तालिकामा हाल एथ्लेटिको ७ खेलपछि १७ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ भने बार्सिलोना समान खेलपछि ११ अंकसहित आठौं स्थानमा छ ।
अवे मैदानमा लिगकै एक बलियो टोलीविरुद्ध उत्रिनुअघि बार्सिलोनाका प्रमुख प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले खेलबारे धारणा राखेका छन् । खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुरा गर्दै डच म्यनेजरले एथ्लेटिकोसँग खेल लिगको उपाधि यात्रामा फर्किन महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा राखेका मुख्य पाँच भनाइ यस्ता छन्–
१. यो एक कठिन खेल हो । दुवै टिमलाई यो खेलमा डर हुनेछ । एथ्लेटिको आफ्नो घरमा हुने भएकाले हामीमाथि उनीहरूले दबाब बनाउनेछन् । उनीहरू हामीविरुद्ध रक्षात्मक खेल खेल्नेछन् । तर, हामीले अट्याकिङ खेल खेल्नुपर्छ । हामी उनीहरूमाथि बदाब बनाएर खेल्नेछौं र सकेसम्म चाँडो खेलमा गोल निकाल्न प्रयास गर्नेछौं । यो खेलमा सुरुआती गोल गर्ने टिमले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ । उनीहरूले हामीविरुद्ध निकै राम्रो तयारी गरेका छन् ।
२. मेस्सीको बारेमा आलोचना हुँदा मलाई राम्रो लाग्दैन । मिडियाले अहिले उनको नाम जोडेर विवाद सिर्जना गरिदिएका छन् । मैले बुझेसम्म मेस्सी यस्ता आलोचना र विवाद मन पराउँदैनन् । उनी एक शान्त व्यक्ति हुन् । हालसालै उनले दिएको प्रतिक्रियाप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन । उनी अहिले लयमा छैनन् । यही बेला मिडियाले उनीमाथि दबाब बनाउँदा उनको त्यो प्रतिक्रिया अस्वभाविक थिएन । उनी मेरा खेलाडी हुन् । र, प्रशिक्षकका रूपमा मैले उनको रक्षामा उभिनुपर्छ । मेस्सी र ग्रीजम्यानको सम्बन्ध राम्रो छैन जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, त्यहाँ यसलाई विषय बनाइएको छ ।
३. एथ्लेटिकोविरुद्ध मेस्सीले राम्रो गर्नेमा म विश्वस्त छु । उनीसँग मैले यस खेलको विषयमा व्यक्तिगत छलफल गरिसकेको छु । उनी उत्साहित छन् । उनी सधैं यस टोलीका महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन् । जब हामी मड्रिड पुग्छौं, त्यहाँ एक कठिन खेल हुनेछ । एथ्लेटिकोमा निकै राम्रा र प्रतिभावान् खेलाडी छन् । गत सिजन उनीहरूले च्याम्पियन्स लिगमा गरेको प्रदर्शन हामीले बिर्सेका छैनौं । त्यसै पनि अहिले उनीहरू हामीभन्दा राम्रो अवस्थामा छन् । मलाई थाहा छ, उनीहरूले हामीलाई निकै समस्यामा पार्नेछन् । तर, हामीले यो खेल जित्नैपर्छ ।
४. एथ्लेटिकोविरुद्ध कसले कुन भूमिमा खेल्छ भन्ने मैले निर्णय गरिसकेको छैन । केही खेलाडी हामीसँग हुनेछैनन् । यस खेलमा फाती र बुस्केट्स नभए पनि हामीसँग राम्रा विकल्पहरू छन् । कोउटिन्हो फर्किंदा म खुसी छु । हाम्रा सबै खेलाडी धेरैभन्दा धेरै खेल्न र टिमलाई सघाउन चाहन्छन् । तर, सबैलाई समय दिन कठिन छ । प्रशिक्षकका रूपमा मैले आवश्यक खेलाडीलाई टोलीमा राख्नुपर्छ । एथ्लेटिकोविरुद्ध मेस्सीसँग अगाडि को–को हुन्छन्, त्यो अन्तिम समयमा थाहा हुन्छ । भोलि ग्रीजम्यानले सुरुआत गर्नेछन् । अहिले म यति भन्छु ।
५. मलाई थाहा छ, हामीले लिगमा सुरुआत राम्रो गर्न सकेनौं । हामी अहिले जुन स्थानमा छौं, त्यो राम्रो होइन । तर, लिगमा अझै लामो यात्रा बाँकी छ । हामी अझै पनि सुरुआती चरणमै छौं । हामीले बाँकी दिनमा राम्रो गर्न सक्छौं । तर, यदि हामी उपाधि जित्न प्रतिस्पर्धामा छौ भने एथ्लेटिकोजस्ता टिमलाई पराजित गर्नैपर्छ । किनभने, अहिले नै उनीहरू हामीभन्दा ६ अंकले अघि छन् । भोलि हामीले नजिते हामी अझै पछि पर्नेछौं । लिगमा सुरुआती १० खेलअघि नै ९–१० अंकले पछि पर्नु ज्यादै खराब हुनेछ । हामी यो स्थिति आउन दिनेछैनौं ।
प्रकाशित मिति ६ मंसिर २०७७, शनिबार १४:१९